ကန်ဒေါ်လာသန်း ၅ဝကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးတွင် ကုန်တွင်း ဆိပ်ကမ်းများ ?? - Yangon Media Group
ကန်ဒေါ်လာသန်း ၅ဝကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးတွင် ကုန်တွင်း ဆိပ်ကမ်းများ ??
ကန် ဒေါ်လာသန်း ၅ဝ ကျော်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံထားသည့် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းများကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းများ ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ပကုမ္ပဏီတစ် ခုဖြစ်သော Kerry Logistics ကုမ္ပဏီက ရာခိုင်နှုန်း ၇ဝ၊ ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Mother Logist ics ကုမ္ပဏီကရာခိုင်နှုန်း ၃ဝ ထည့် ဝင်ကာ ပူးပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြ ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ယင်းကုမ္ပဏီနှစ်ခု ပူးပေါင်းထားသော KM Terminal and Logistics Limited သည်နှစ် ၅ဝ BOT လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားကာ အစိုးရခွင့်ပြုလျှင် ၁ဝ နှစ်စီနှစ်ကြိမ် သက်တမ်းတိုးခွင့် ရရှိမည်ဖြစ် သည်။ ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာ ဏအဖြစ်အစိုးရကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၁၇ သန်းပေး သွင်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတို့တွင် ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းများ တည် ဆောက်ရန်၂ဝ၁၇ ခုနှစ်ဧပြီ၃ရက် ကမြန်မာ့မီးရထားနှင့် စာချုပ်ချုပ် ဆိုခဲ့ကြောင်း KM Terminal and Logistics Limited ၏ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးညီထွဋ် ကရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအပြီး မီဒီယာ များကိုပြောသည်။
”ငွေကြေးတစ်ခု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရင်ငွေပြန်ရနှုန်းနဲ့ ပြန်တွက်ရ တယ်။ နှစ် ၅ဝ ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ပထမပိုင်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေလုပ်ရတယ်။ဒေါ်လာ ၅၅ သန်းပေါ့နော်။ ပထမ နှစ်တွေမှာဆိုရင် ဖောက်သည်တွေ ကလည်းမရသေးဘူး။ တဖြည်း ဖြည်းဒီဂိုဒေါင်တွေ အားလုံးပြည့်မှ ရထားကလည်းနေ့တိုင်း ပြေးနိုင် မှ အကျိုးအမြတ်ရလာမှာ။ အဲဒါ ကြောင့် ဘဏ်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ ခြောက်နှစ် ပြည့်မှသာလျှင် စအရင်းကျေပြီး အမြတ်စရမှာပေါ့။ ဝင်ငွေရနှုန်း နဲ့တွက်ပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ရွာသာကြီးကုန်းတွင်း ဆိပ် ကမ်းအတွက်ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄ဝ နှင့်မန္တလေးမြစ်ငယ်ကုန်းတွင်း ဆိပ်ကမ်းအတွက် ကန်ဒေါ်လာ ၁၅ သန်းမြှုပ်နှံထားကြောင်းသိရ သည်။ မြစ်ငယ်ကုန်းတွင်းဆိပ် ကမ်းကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်မေတွင် တည် ဆောက်ပြီးစီးပြီး လုပ်ငန်းများစမ်း သပ်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ရွာသာကြီးကုန်းတွင်း ဆိပ်ကမ်းကို နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် တရားဝင်စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ရရှိလာမည့်အကျိုးအမြတ်၏ရာခိုင်နှုန်းအချို့ကို မြန်မာ့မီး ရထားသို့ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ဂိုထောင်များတွင် ကုန်ပစ္စည်း ထားသိုမှုအတွက်လည်း အစိုး ရကို ရာခိုင်နှုန်းအချို့ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ရန်ကုန်ရှိ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် သီလဝါ ဆိပ်ကမ်းများတွင်ယာဉ် ကြောကျပ်တည်းမှုကို လျှော့ချပြီး ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရာ တွင်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ကာကုန်းတွင်း ဆိပ်ကမ်း များ တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးရွာသာကြီးနှင့် မြစ်ငယ်ဆိပ်ကမ်းတို့ ကို ကွန်တိန်နာရထားတွဲများဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြေးဆွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရွာသာကြီးမှ မြစ်ငယ်ဆိပ် ကမ်းသို့ အပတ်စဉ်စနေ/တနင်္ဂနွေ တွင် အနည်းဆုံးကွန်တိန်နာရထား ကုန်တွဲ ၁၅ တွဲမှအများဆုံး ၂၇ တွဲပြေးဆွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာ့မီးရထားက ရန်ကုန်မှ မန္တလေးသို့ ပို့ဆောင်မည့်ကုန်တစ် တန်အတွက် တစ်မိုင်လျှင်ကျပ် ၃ဝ မန္တလေးမှရန်ကုန်သို့ပို့ဆောင် ပေးမည့် ကုန်တစ်တန်အတွက် တစ်မိုင် လျှင်ကျပ် ၂ဝ နှင့် အခွန် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းကောက်ယူမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာ့မီးရထားက ကုန်တန် ချိန်ကို မိုင်နှုန်းဖြင့်တွက်ချက်ရယူ မည်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် Doll To Doll စနစ်ဖြင့်သယ်ယူစရိတ် တို့ပေါင်းကာ သယ်ယူစရိတ်ကျ သင့်မည်ဖြစ်သော်လည်း ကားဖြင့် သယ်ဆောင်သည်ထက် စရိတ်သက် သာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပထမကမ္ဘာစစ် တရားဝင် ပြီးဆုံးခဲ့သည့် နှစ်တစ်ရာပြည့် အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနား ထောက်ကြန့် ဓနသဟာ??
ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးဆုံးမှု နှစ်ရာပြည့် အခမ်းအနား ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပ၊ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆေ
အင်္ဂလန်တွင် ကစားခွင့်ရသော လူးဝစ်ကွတ်ကြောင့် အဘိုးဖြစ်သူ လောင်းကြေးနိုင်
”ဒရာမာနဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်တွေက ကျွန်တော့်အတွက် စိန်ခေါ်မှု အသစ်တွေပါ” ဒါရိုက်တာ ရာဇဝင်ကို